Accueil > Gazetin'ny nosy > Ntsay Christian: Tsy miraharaha izay fahasahiranam-bahoaka
Ntsay Christian: Tsy miraharaha izay fahasahiranam-bahoaka
Misondrotra isam-bolana ny vidin-tsolika eto Madagasikara hatramin’izay nitondran’ingahy Ntsay Christian ny governemantan’ny marimaritra iraisana izay. Niakatra ihany koa ny saran-dalana ka lasa 500ariary ny taxi-be eto Antananarivo renivohitra raha toa ka 400 ariary izany teo aloha. Tsy misy intsony ny saran-dalana 200ariary na dia ao anelanelan’ny fiantsonana roa aza.
Tsy izany ihany fa hatramin’ny nitondran’ingahy Ntsay Christian izay dia nirongatra izay tsy izy ny fanaovana takalon’aina olona teto Madagasikara na ny “kidnapping” izany. Mandry andriranantsy ny vahoaka manontolo hatrany ambanivohitra ka hatraty andrenivohitra. Hatramin’izao dia tsy misy ny vokatra azo avy amin’ny tsy fandriam-pahalemana izany fa toa mijery izany fotsiny ity fanjakana tantanin’ingahy Ntsay Christian ity. Misy mihitsy aza milaza fa miray tsikombakomba amin’ny dahalo sy ny mpanao “kidnapping” ny mpitondra. Tsy misy mihevitra ny ain’ny vahoaka sy ny fananany mihitsy.
Mahakasika ny lalana eto Madagasikara dia tsy misy fikarakarana izany. Lavadavaka no mameno ny lalana eto Antananarivo ary vovoka sy vatokely miparitaka amin’ny tava sy ny fitafiana raha vao mitsoka ny rivotra. Raha sendra avy ny orana dia fotaka tsy hita intsony no manerana ny renivohitra. Ny rano maloto mikoriana eny amoron-dàlana dia feno maloto avy any an-tranon’olona fa tsy misy mandeha intsony ny lakan-drano. Miparitaka ny diky eny rehetra eny. Ny any ambany tanàna dia mifangaro amin’ny maloto isan-karazany ny vahoaka ka raha tsy ranon-dolana no mameno ny tanàna dia fotaka marihitrin’ny fako no diavina rehefa mivoaka sy miditra ny tanàna sy hatrany an-tokan-trano.
Ny làlana eto Antananarivo aza ireo no manjo azy dia inona no ho vita any ambanivohitra lavitra any?
Any ambanivohitra indray dia doro-trano, asan-dahalo amin’ny halatr’omby, takalon’aina, izany no iainana andro aman’alina. Izay tsy mahavita miaro ny tenany dia maty. Voatery manao izay ahafahany miaina ny tantsaha ka ny iafarany dia manao dahalo tsy fidiny koa.
Manomboka miakatra indray ny vidim-bary eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Efa tafakatra hatrany amin’ny 600ariary ny kapoakan’ny vary amin’ny ankapobeny. Tsy misy akory aroriaka ataon’ny fanjakana amin’izany fa dia jereny fotsiny ihany. Ahiana ny hiakaran’ny vidin’ny vary ho 1000 ariary ny kapoaka amin’ny maitso ahitra. Lany andro mamono afo amin’ny fitakiana ataon’ny sendika sy ny mpanao pôlitika ity fanjakana ity.
Raha fintinina dia tsy miraharaha izay fiainam-bahoaka velively ity governemanta tarihin’i Ntsay Christian ity. Lany andro manery olona amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ka tsy miraharaha ny aim-bahoaka. Marina fa ny fifidianana no nametrahana azy eo nefa aoka hazava fa mbola ambonin’izany ny fiainan’ny vahoaka Malagasy 25 tapitrisa. Tsy misy zavatra vitan’ny governemanta io raha tsy ny hanolo olona ho mpiasam-panjakana ambony. Fantatra nefa fa governemanta enim-bolana ihany no tantaniny ka tsy tokony hanovana olona toa ny ataony amin’izao fotoana izao io izany na iray aza. Potika noho izany ny fiainam-bahoaka. Fiadian-toerana tanteraka no mitranga ankehitriny. Tena tetezamita faharoa no mitranga amin’ity governemanta ny Ntsay Christian ity ka faly ny hihinana volam-bahoaka fotsiny sy hanararaotra fanjakana ihany. Tsy tsapan’izy ireo fa mijaly fadiranovana ny vahoaka ankehitriny izay efa mizaka ny tsy eran’ny aina tanteraka.